FAMONOANA TOVOLAHY TAO MAHAJANGA : 14 taona monja ireo voarohirohy
Tovolahy roa voarohirohy tamin’ny famonoana ilay tovolahy 16 taona teo Tsaramandroso ambony no efa nosamborin’ny Polisy. 25 mars 2021
Mbola zaza tsy ampy taona daholo izy ireo satria dia 14 taona monja na i Poupouza Odilon na i Elisio. Niditra an-tsehatra nanao ny fikarohana avy hatrany ny Polisy, ny andron’ny alahady, nisehoan’ny loza ka nahafahana nisambotra azy mirahalahy ireo, noho ny fiaraha-miasan’ireo Polisy tamin’ny vahoaka. Vita ny famotorana ary natolotra ny fampanoavana izy ireo ny talata teo. Tsiahivina moa fa ady sipa no nahatonga ny famonoana. Araka ny fitantaran’ny rain’ilay tovolahy maty dia nisy nandaroka ny sipan’ny zandriny ka lasa tany Tsaramandroso izy ireo hanontany ny anton’izany, saingy tsindrona antsy no nitsena azy. Namoy ny ainy izy na dia nentina niala-nenina tany amin’ny hopitaly PZaGa aza.
Araka ny nambaran’ny ao amin’ny Polisim-pirenena dia hita fa tanora tsy ampy taona no tena manatanteraka ny fandikan-dalana sy ny herisetra eto Mahajanga, manendaka, mamono olona, mamaky trano… Miisa 50 mahery ny zaza tsy ampy taona natolotra ny Fitsarana noho ny herisetra tamin’ny telo volana voalohany tamin’ity taona ity. Vao tsy ela noho ny olana Tsararano ambany sy Fiofio dia zaza tsy ampy taona miisa 10 no natolotra ny Fitsarana ary naiditra am-ponja.
Teny Ambalavola koa dia zaza tsy ampy taona miisa 4 no voarohirohy tamin’ny fanindronana antsy olona ka natolotra ny Fitsarana ary notazomina vonjimaika. Miisa 30 mahery ireo zaza tsy ampy taona noho ny herisetra eto an-tampon-tanànan’i Mahajanga. Ilaina ny fanomezana vaovao ny mpitandro filaminana hahafahana misambotra azy ireny.